भाइरसको तेस्रो लहर घातक हुनसक्छ, जोगिन के गर्ने ? यस्ता छन् विज्ञको सुझाव – Nepal Press
शेरबहादुर पुनसँग नेपाल टक
२०७८ साउन १४ गते १८:५८
काठमाडौं । एउटा प्रश्न जसको उत्तर दिन अहिले सरकारलाई पनि मुस्किल भैरहेको छ । त्यो हो- अहिले नेपाल कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरमै छ या तेस्रो लहरको प्रारम्भिक चरणमा ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी असोज १५ गतेको आसपासमा तेस्रो लहर सुरु हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले दुई साताअघि विश्व तेस्रो लहरको प्रारम्भिक चरणमा रहेको घोषणा गर्‍यो ।
टेकुस्थित अस्पतालमा कोभिड–१९ विरुद्धको चिनियाँ खोप भेरोसेल लगाउन लामबद्ध सर्वसाधारण । भीडभाडले खोप केन्द्रमा संक्रमण फैलने चिन्ता विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् ।
तेस्रो लहरका लागि मुलुकलाई बालरोग विशेषज्ञहरुको आवश्यकता पर्ने चिकित्सक पुनको सुझाव छ ।
दोस्रो लहरमा राजनीतिक कार्यक्रम, भीडभाड र पर्वजस्ता गतिविधिले संक्रमण बढाएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु गल्ती भएको उनको ठम्याइ छ । ‘तेस्रो लहरमा सिक्नुपर्ने कुरा धेरै आउन सक्छ । हामीभन्दा भाइरस एक कदम अगाडि छ । जुन दिन हामी भाइरसभन्दा एक कदम अगाडि गएर बाटो ब्ब्लक गर्छौैं, तब हामी विजयी हुन्छौं । भाइरसको हर्कतबाट सिकेर नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ’ पुनको कथन छ ।
प्रकाशित: २०७८ साउन १४ गते १८:५८